यी कलाकारको वास्तविक नाम के-क होला हेरुम नत ? – News Nepali Dainik
यी कलाकारको वास्तविक नाम के-क होला हेरुम नत ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ समय: २२:०८:५२
मुम्बई(एजेन्सी)– बलिउडमा उत्कृष्ट अभिनय गरेर कलाकारहरुले आफ्नो नामलाई लोकप्रिय बनाएका छन् ।
तर यी लोकप्रिय नामको वास्तविक नाम चाहिँ सायद कमैलाई मात्र थाहा होला । फिल्ममा आउनु अघि उनीहरु केहीले ज्योतिष विज्ञानका कारण त केहीले अन्य कारणले आफ्नो नाम बदले । यहाँ नाम बदलेर लोकप्रिय बनेका अभिनेता अभिनेत्रीको वास्तविक नाम प्रस्तुत गरिएको छ ।
बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनको वास्तविक नाम इंकलाब श्रीवास्तव हो । प्रख्यात लेखक सुमित्रानन्दन पन्तले अभिनेताको नाम अमिताभ राख्ने सल्लाह दिएका थिए, जसबाट बिग बी इंकलाबबाट अमिताभ बने । उनको थर पहिले बच्चन थिएन । अमिताका पिता हरिवंश रोय प्रख्यात लेखक थिए । जसले आफ्नो थर बच्चन राखेका थिए । त्यहीकारण अमिताभले पनि आफ्नो थर बच्चन राखे ।
अभिनेत्री शिल्पा सेठ्ठी जन्मिएपछि परिवारले उनको नाम अश्विनी राखेको थियो । शिल्पाकी आमा सुनन्दा सेठ्ठी एक ज्योतिष हुन् । जसले छोरीको नाम बदलेर शिल्पा राखीदिइन् । शिल्पा बलिउडकी फिट अभिनेत्रीमा पर्दछिन् ।
बलिउडका ‘खेलाडी कुमार’ अक्षय कुमारको वास्तविक नाम राजीव हरि ओम भाटिया हो । उनी महेश भट्टको फिल्म ‘आज’को भूमिका ‘अक्षय’बाट निकै प्रभावित भएका थिए । यो भूमिका कुमार गौरवले निभाएका थिए । उनी यो चरित्रबाट यति प्रभावित भए कि एकदिन उनी अचानक अदालत पुगेर आफ्नो नाम राजीवबाट अक्षय बनाए ।
अर्का अभिनेता सनी देओलको वास्तविक नाम अजय देओल हो । उनको नाम बलिउडमा पाइला चाल्नु अघि नै सनी राखिएको थियो । उनको भाई बोबी देओलको वास्तविक नाम विजय हो ।
बलिउकी प्रख्यात सुन्दरी अभिनेत्री रेखाको वास्तविक नाम भानुरेखा गणेशन हो । जबकी रेखा उनको निकनेम हो । रेखा भारतीय अभिनेता जेमिनी गणेशनकी छोरी हुन् । फिल्ममा उनी आफ्नो निकनेमबाटै लोकप्रिय भइन् ।
अभिनेता सैफ अली खानले आफ्नो वास्तविक नामलाई जहिल्यै लुकाए । तर केही वर्ष अघि उनको वैवाहिक प्रमाणपत्र लिक भएको थियो । जसमा उनको नाम सैफ नभई साजिद अली खान लेखिएको थियो । अभिनेता अजय देवगनको जन्मपछि उनको नाम विशाल देवगन राखिएको थियो । यद्यपि क्रमागतका कारण उनको नाम विशालबाट अजय राखियो ।
अभिनेत्री कियारा आडवाणीको वास्तविक नाम आलिया आडवाणी हो । फिल्ममा आउनुअघि उनलाई अभिनेता सलमान खानले नाम बदल्न सुझाव दिएका थिए । किनकी बलिउडमा पहिला नै आलिया भट्ट उपस्थित थिइन् । त्यहीकारण उनले आफ्नै इच्छाले नाम फेरिन् । अभिनेता टाइगर श्राफको वास्तविक नाम जय हेमन्त श्राफ हो । पिता जेकीलाई उनलाई टाइगर नाम दिए ।
फिल्म ‘मेने प्यार क्यों किया’बाट बलिउडमा पाइला चालेकी अभिनेत्री कटरीना कैफको वास्तविक नाम कटरीना टरकोटे हो । उनको आमाको नाम सुजैन टरकोटे थियो । भारत आएपछि कटरीनाले आफ्नो पिता मोहम्मद कैफको थर लगाउन शुरु गरिन् । उनका पिता एक कश्मिरी हुन्, जो ब्रिटेनमा व्यापार गर्छन् ।
बलिउडकी बोल्ड अभिनेत्री मल्लिका शेरावतको वास्तविक नाम रीमा लाम्बा हो । बलिउडमा आउनु अघि रीमा नामको भ्रमबाट बच्नका लागि उनीले नै मल्लिका नाम राखिन् । शेरावत उनको आमाको थर हो ।
अभिनेता दीलिप कुमारको वास्तविक नाम यूसुफ खान हो । उनको जन्म पेशावरमा एक मुस्लिम परिवारमा भएको थियो । जहाँ उनले यो नाम पाएका थिए । अभिनेताले फिल्ममा आउनु अघि दीलिप कुमार राखेका थिए । यो नामको सुझाव उनलाई देविका रानीले दिएकी थिइन् । यूसुफ जब दीलिप बन्नका लागि सहमत भए, उनलाई सन् १९४४ मा फिल्म ‘ज्वारभाटा’मा कास्ट गरियो ।
Last Updated on: February 3rd, 2021 at 10:08 pm